mai 2017 · déliremadagascar
politique	 13 mai 2017 R Nirina
VTSR: “Tsy marin-toerana ny fitondrana ankehitriny”.
Resy lahatra ny VTSR izany ivondronan’ny mpanao politika manohana sy manohitra ny fitondrana ary ny afovoany fa ahitana kolikoly avokoa ny ratsa-mangaikam-panjakana rehetra ka izany no mahatonga ny fitondram-panjakana tsy marin-toerana. Noho izany, mila esorina avokoa ireo manao ny tsy mety. Ny fanadiovana ny fitantanana ho fitondrana tsara tantana no tanjona eto. Continuer la lecture →
Mahoraka	 6 mai 2017 .
Manoloana ny fisamborana an’i Fernand Cello, mpanao gazetin’ny Radio Jupiter, ny alin’ny zoma 5 mey teo, izahay mpikamban’ny Holafitry ny Mpanao Gazety eto Madagasikara dia manao izao fanambaràna izao : Continuer la lecture →